दोस्रो विश्व मार्चको पुस्तक - विश्व मार्च
दोस्रो विश्व मार्चको पुस्तक
घर » दोस्रो विश्व मार्चको पुस्तक
संस्करण पुस्तकको समान हुनेछ 1 वर्ल्ड मार्च.
आकार x० x २२ सेमी, pages०० पृष्ठ (रंगमा 30 color० रb/ w मा 22०)। आन्तरिक कागज: म्याट कउच १०० जीआर। रंग र gr ० जीआरको अफसेटको लागि। १/१ को लागी। नरम कभर पलंगमा Cover०० जीआरमा कभर गर्नुहोस्। मैट प्लास्टिकिज्ड। बाध्यकारी: PUR वा टाँसिएको।
हामी विचार गर्दैछौं कि पुस्तकको विमोचन टीपीएएनको सक्रियतासँग मेल खान्छ। त्यो केसमा पुस्तकले त्यस शीर्षकमा एउटा घुसाउनेछ।
प्रिन्टि toको सन्दर्भमा, सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँहरू आन्तरिक संस्करणको मात्रा, प्रिन्टि costs लागत र देशको कुनै बिन्दुमा यातायातलाई ध्यानमा राखी खोजिरहेका छन्।
त्यहाँ पुस्तकको दुई संस्करणहरू छन्
एक, आन्तरिक, गैर-वाणिज्यिक, २० यूरोको लागत मूल्यमा सदस्यताद्वारा (जसमा प्रत्येक देशको लागि लेआउट, मुद्रण र यातायात समावेश छ)। यो संगठनहरू मार्फत सञ्चालन गरिन्छ (MSGySV, विश्व मार्च र अन्य).
अर्को, वाणिज्यिक सर्किटमा (आरक्षणको आवश्यकता बिना): मूल्य e० यूरो हुनेछ। यो सर्किट अन्तर्राष्ट्रिय वितरण (अमेजन, कासा डेल लिब्रो, बुकस्टोरहरू वा अन्य व्यावसायिक सर्किटहरू) को साथ बुकस्टोरहरूको माध्यमबाट हुनेछ। यो दोस्रो सर्किट आन्तरिक सदस्यता भन्दा २ महिना पछि सक्रिय हुनेछ।
दुबै सर्किटसँग सबै कानुनी आवश्यकताहरू हुनेछन्।
हामी अर्डर गरिएको हजार प्रति भन्दा बढिको परिकल्पनामा मूल्यहरू समायोजन गर्दैछौं। यो जान्नु रोचक छ कि प्रत्येक ठाउँमा कतिवटा पुस्तकहरू आवश्यक हुन्छन्।
तपाईं अब देखि पुस्तक आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई भुक्तान गर्न अक्टुबर १० सम्म छ। सदस्यता आदेशहरू त्यहाँ बन्द छन्। नयाँ अर्डरहरूले route० यूरोको मूल्यमा वाणिज्य मार्ग प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो विश्व मार्चको पुस्तक प्रस्तुतीकरण
पुस्तक प्रस्तुतिहरू प्रत्येक स्थानमा बनाइनेछ। यो पुस्तक सहयोगीहरू र सहभागीहरूसँग पुन: कनेक्ट गर्न धेरै उपयोगी हुनेछ2™ एमएम र ªªª एमएम को तयारी र बोध, साथ साथै सबै अघिल्लो कार्यहरु को आवेग को लागी।
नोभेम्बरमा हास्य पुस्तक यू एन क्यामिनो ए ला पाज वा ला नोभोलिनेशिया जारी हुनेछ।
पहिलो विश्व मार्च र मध्य र दक्षिण अमेरिकी मार्चका पुस्तकहरूको सानो स्टक छ।
दोस्रो विश्व मार्च बाट १० भन्दा बढी पुस्तकहरूको अर्डरमा यी पुस्तकहरूको उपहार समावेश हुनेछ।
दोस्रो विश्व मार्चको पुस्तकको संस्करण र अर्डरसँग नियोजित मितिहरू। यी मितिहरूले केहि समायोजन भोग्न सक्छन्:
/ / १15 - पुस्तक अर्डरको सुरूवात।
२/१० - ZOOM - दोस्रो MM को पुस्तकको विश्व भर्चुअल सुरुवात। १० एच कोस्टा रिका, ११ बिहान। कोलम्बिया, पनामा, इक्वेडर, १२ घ। साओ पाउलो ब्राजील, चिली, दिउँसो १ बजे अर्जेन्टिना, बेलुका 2। मोरक्को, साँझ। मध्य यूरोप, :10: p० बिहान भारत, 2: p:10 बिहान नेपाल, १ घ दक्षिण कोरिया //२11
तेस्रो MM को घोषणा।
११/१15 - अर्डरहरू बन्द गर्नुहोस् र भुक्तानीहरू प्राप्त गर्न अन्त गर्नुहोस्।
११/१15 - लेआउटको अन्त्य
११/30० - छाप्नको लागि प्रविष्टि
१२/१15 - छापिएको पुस्तक
कसरी अर्डर गर्ने र प्रविष्ट गर्ने?
अर्डर गर्न, त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन्
निम्न फारम भर्नुहोस्: https://docs.google.com/forms/d/16N-u1n0Tacyz-a7J-aMsk-j60A9Knn5YPG4_hlGMBTY/
वा ठेगानामा ईमेल पठाउनुहोस् book@theworldmarch.org निम्न डाटा स indic्केत गर्दै: नाम, ठेगाना, शहर, देश, संघ वा समूह, दूरभाष। देश कोड, ईमेल र प्रतिलिपिहरूको संख्या आरक्षित गर्न को लागी.
आयको लागि, खाता नम्बर जहाँ निक्षेप September० सेप्टेम्बर अघि हुनुपर्दछ:
शीर्षक: शान्ति र अहिंसाको लागि विश्व मार्च
जब निक्षेप गरिन्छ, नाम, रकम र पूरा हुने मितिको साथ एक रसिद पठाउनुहोस्